Deg Deg-Dagaal Qarax ku bilowday oo ka soconaya duleedka Baydhabo. – Hornafrik Media Network
Xiisadda Ka Dhextaagan Imaaradka iyo Qatar Waxa ay Faa’ido u Tahay Iran, Maraykankase…
Deg Deg-Dagaal Qarax ku bilowday oo ka soconaya duleedka Baydhabo.
Hornafrik-Warbaahinta Hornafrik wararka ka soo gaaraya gobolka Baay ayaa sheegaya in deegaanka duleedka ka ah magaalada baydhaba lana yiraahdo Deeynuunaay ay saaka arooti Al-shabaab ku qaadeen weearr ku bilowday qarax xoogan oo ilaa ahaatan aan la xaqiijin Karin nuuca qaraxa uu ahaa.
Hada axaa soconaya dagaal culus oo u dhaceyea ciidamada dowladda iyo Al-shaabki weearrka ku qaday saldhiga ay ciidamda kaga sugnaayeen Deeynuunay ee Gobolka Baay.
Xiriio badan ayaan la sameynay dadka deeganka iyo sido kale ilo waredyo kale oo baydhabo ku sugn waxaana ay dhamaan noo sheegeenn in dagaalka uu wali socdo ayna jirto dhimasho baadan iyo dhawac kala gaaray labada dhinac iyo shacab intaba.
Saraakiil ciidan ayaa kamid ahaa dadka aan qadka taleefoonka kula xriiriray waxaaney ii sheegeen in ay iska difaceen shababka weerarka ku qaaday walina kula dagaalamayaan banaanbka deynuunaay qasaaraha dhankoduna uu yahay mid yar.
Warbahinta Al-shabab ayaa lagu bahiyay in ay weerarka ku dileen askar badan lana wareegeen deegaanka Deeynuunaay sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen saaanad milataro oo ay ciidanka dowladda lahayeen ,
Balse xaqiiqada dadka shacabkl ah laga helayo aya ah in deegaank Deeynuunaay wali lagu dagaalamayo Al-shabaabna aaney la wareegin.
Dastuurka: Habraaca Sharci-dejinta Baarlamaanka Federaalka Iyo…
AMISOM oo u badashay Dhulbeereedkii Somalia goobo lagu beero…
Khayre oo wasiir shaqadii ka joojiyay
Boqolaal Soomaali ah oo ku xaniban deegaanka Guji ee Itoobiya.
Boqolaal Soomaali ah oo ku xaniban deegaanka Guji ee…
Deg Deg-Dagaal Qarax ku bilowday oo ka soconaya duleedka…